Iflethi yanamhlanje yeScarborough kufutshane neendawo zombini kunye nedolophu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTracey
Iflethi entle esembindini weScarborough kwimigangatho emibini enezinyuko ezijikelezayo, eneyadi encinci yabucala kufutshane neNqaba yaseScarborough kunye nombindi wedolophu, phakathi kweendawo zombini zaseMantla naseMazantsi. Kwindawo entle yolondolozo. Ukuhamba umgama kuzo zonke iindawo ezinomtsalane zeScarborough kunye nezinto eziluncedo. Iipasi zokupaka, iWiFi & Netflix, ikhonsoli yemidlalo, iti, ikofu, iswekile kunye neebhiskithi, isepha yesandla, iitawuli, ilinen ebandakanyiweyo kunye nezinto zokucoca-Yonke into oyifunayo :) Zijonge ngokwakho https://www.facebook.com/ 112castleroad/
I-Quirky, ithambile kwaye icoceke kakhulu iflethi yanamhlanje kwimigangatho emi-2 kwindawo yolondolozo kufutshane nenqaba. Kwisakhiwo esinomtsalane esinezinye iiflethi ezimbini kuphela kwipropathi yonke.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini kumgangatho ophantsi, indawo yokuhlala kunye nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho osezantsi ofikelelekayo ngezinyuko ezijikelezayo.
Kukho indawo yokutyela yasekhitshini ephangaleleyo enesofa kunye neTV kunye nenye indawo eyahlukileyo yokwamkela iindwendwe / igumbi leTV elineTV ehlakaniphile, iNetflix kunye nePS3 kunye nebhedi yesofa yokuhlalisa iindwendwe ezi-2 ezongezelelweyo.
Singanikezela ngebhedi encinci yabantwana abancinci ukuba iyafuneka kwigumbi lokulala eliphindwe kabini.
Indawo encinci yabucala ebiyelwe ngodonga ngasemva.
Indawo efanelekileyo kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo kunye nazo zonke ezikumgama wokuhamba kubandakanya ulwandle, idolophu, iAlpamere Water Park, iOpen Air Theatre kunye nePeasholm Park.
Ukusetyenziswa kwamahhala kwe-washer dryer, i-WiFi, i-Netflix, isimahla kwiipasiti zokupaka ezitalatweni ezibonelelweyo, iti, ikofu, iswekile kunye neebhiskithi, iisepha zezandla, iilinen kunye neetawuli, ukuhlamba ulwelo, izitshizi ezichasene nebhaktiriya kunye netawuli yekhitshi enikezelweyo ngexesha lokuhlala kwakho.
Siluhambo lwesibini lwe-30 ukusuka kwiimbono ezimangalisayo zezibuko njengoko kubonisiwe kwimifanekiso kwaye sisondele kakhulu eScarborough Castle
Kwindawo ethandekayo yolondolozo lwendalo kufutshane neScarborough Castle kodwa kukuhamba nje imizuzu emi-5 ukuya edolophini, ukuhamba imizuzu eli-10 ukuya elunxwemeni, imizuzu eli-15 ukuya eAlpamere Water Park, Peasholm Park kunye neOpen Air Theatre. Iyadi encinci yabucala, iWiFi kunye neNetflix. Ukuzijonga ngokwakho ngebhokisi yokutshixa isitshixo https://www.facebook.com/112castleroad/
I-imeyile okanye ifowuni